विद्यार्थीका लागि उपयोगी यस्तो रिसर्च, गणित विषयसँग सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ला ? « Nagarik Khabar
विद्यार्थीका लागि उपयोगी यस्तो रिसर्च, गणित विषयसँग सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ला ?
प्रकाशित मिति :9June, 2021 9:17 pm
एजेन्सी । विद्यार्थी छँदा हामी मध्ये धेरैले ‘हिसाब भने’सि पिसाब’ भन्ने उखान सुनेकै छौं होला । त्यस्तै ‘हिसाब र पिसाब दुबै क्लियर हुनुपर्छ’ भन्ने पनि गरिन्छ । यी दुबै हिसाब र पिसाबको सम्बन्ध दर्शाउने भन्दापनि नेपाली समाजमा चलेका उखान हुन् । हिसाब अर्थात् गणित बिषयका बारेमा नेपालमा विद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रमबारे बहस पनि चलेकै थियो । तर अब हामी यहाँ गणित बिषयले विद्यार्थीमा पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।
बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासका लागि गणित विषय जरुरी भएको एक शोधले जारी गरेको रिपोर्टमा बताएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको उक्त रिसर्चले किशोर अवस्थामा गणितको पढाई नगर्दा वा परपर भाग्दा त्यसको असर विद्यार्थीको सोच्ने र सम्झिने क्षमतामा असर गर्ने बताइएको छ । १४ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समुहका १३३ जना विद्यार्थीहरुमा भएको उक्त रिसर्चमा यस्तो बताइएको हो । अनुसन्धानकर्ताहरुले बेलायतका १६ वर्षका छात्रलाई गणित विषय छोड्ने स्वतन्त्रता छ तर अन्य देशहरुमा त्यस्तो हुन्न । यसको सिधा असर छात्रको मस्तिष्कको विकासमा पर्ने बताइएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले गणित विषय नलिने किशोरको मस्तिष्कको खास भागमा असर पर्छ । मस्तिष्कको जुन भाग सोच्न र सम्झिनका लागि मुख्य भूमिका खेल्छ । उक्त भागमा एक प्रकारको गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिडको कमी भएको पाइयो । रिसर्चको सन्दर्भमा विद्याथीहरुलाई दुई समूहमा बाँडिएको थियो । पहिलो समूमा गणित विषयका छात्र थिए । त्यसैगरि दोस्रो समूहमा गणित विषय नलिने छात्रहरु रहेका थिए ।
करीब १९ महिना लगाएर छात्रहरुको मस्तिष्कको परीक्षण गरियो । परीक्षण पश्चात गणितबाट टाढा भाग्ने छात्रहरुको दिमागमा १९ महिना पछि सोच्न र सम्झिन भूमिका खेल्ने रसायन कम मात्रामा पाइयो भने गणितमा चासो राख्नेमा यसको मात्रा पर्याप्त पाइयो ।
शोधकर्ता रोउ कोहेन भन्छन्, ‘गणितका छात्रहरुमा शारीरिक र मानसिक रुपमै असर पर्छ । किशोर अवस्था मानव जीवनको विशेष उमेर अवस्था हो । यस उमेरमा मस्तिष्कको विकासका साथै सोच्ने र सम्झिने क्षमताको पनि विकास भइरहेको हुन्छ । तर, यो अवस्थामै कतिपय छात्रहरु गणितसँग दूरी बनाइराख्छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित जबाफ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाएका छन्